Thor Schrock: Internet Millionaire ọzọ? | Martech Zone
Enyi na-ede blọgụ, Thor Schrock, na-agba ọsọ maka Ọzọ Internet Millionaire!
Thor aghọwo ngwa ngwa maka ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ. Echere m na otu n'ime ihe mere m ji nwee mmasị na Thor na blọọgụ ya nke ukwuu bụ na ọ na-eme ihe ike n'ịkwalite ya mana ịdị umeala n'obi na enyi na enyi n'ụzọ ọ na-eme. Ọ ga-atụpụrụ m email otu oge na mgbe - mana ọ na-ahaziri ya nke ọma, na-eche echiche ma na-atọ ụtọ ịgụ.
Thor dere m taa ma ọ chọrọ enyemaka gị iji mee ya Next Internet Millionaire! Ekwenyere m na ụgbọala ya na ịnụ ọkụ n'obi ya ga-ebuga ya ebe ahụ ma asọmpi ma ọ bụ na ọ bụghị.
Vote maka Thor Schrock, ọzọ Internet Millionaire! Gbalia igbakwunye Blog nke Thor ka ị na-agụ dị ka nke ọma! Ma mụ onwe m, obi ga-adị m ụtọ ma m bụrụ Intanet na-esote narị-thousandaire.
Daalụ nke ukwuu maka edemede na ịja mma Doug! Ọ pụtara ọtụtụ ihe nye m na m mụtara ọtụtụ ihe na blọọgụ gị n'afọ gara aga.
Mee ka m mara ma ọ bụrụ na enwere ihe ọ bụla m nwere ike imere gị!
na-achọ gị kacha mma.
Jun 26, 2007 na 8:25 AM
Na mbu, mu onwe m gaje igba oso na Intanet ozo ma m kpebiri ịga Billionaire kama !!
Dị ka onye ọ bụla ọzọ na-abịa na Nde ma ọ bụ Ijeri Dollar echiche ọ na-adị ka ọ na-ewe Ego iji mee ya! Otu echiche m mere nwere: Flash Slideshows rụpụtara ihe maka ngalaba ọzọ. nke MySpace zụtara ozugbo maka $ 10 ma ọ bụ $ 20 Nde Dollar - yabụ ọ nwere ike ime! Ọ ka ga-amasị m ịme ka echiche m pụọ n'ọnụ ụzọ ebe ọ bụ na a kwadogoro ya + ndị asọmpi dịka Yahoo! ma ọ bụ Google ma ọ bụ Microsoft (ndị nwere ike ibelata ego !!;)) kwesịrị inwe mmasị *
Aga m agha Thor's Blog!
Ọzọ Internet Millionaire
Onye ọ bụla kwesiri ịtụ vootu maka Thor. Ọ bụ ezigbo nwoke ma nyefee ajụjụ ọnụ dị egwu maka Next Internet Millionaire Big Action Podcast.
Kpamkpam lelee ya ma tụọ vidiyo Thor na-enyocha vidiyo 10. Ọ bụ nnukwu mmadụ nke na-eme nnukwu ihe na-enweghị ịbụ jackass!